Home STARS EUROPEAN David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra tantara iray momba ny fanakanana ny baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Edwin Van De Gea'. Ny tantaran'i David De Gea momba ny tantaram-pahavitrihana bebe kokoa ny zava-mitranga momba ny tantaram-piainana tsy hita isa dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony avokoa ny rehetra saingy maromaro kosa no mandinika ny tantaran'ny tantaran'i David De Gea izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa:Voalohandohan'ny fiainana
David de Gea Quintana dia teraka tamin'ny andro faha 7tio 1990 novambra tao Madrid, Espagne, Jose De Gea (ray), mpiambina ny tanjona taloha ary Marivi Quintana (reny), mpitandrina trano.
Teraka tamin'ny fotoana niarahan'ny ray aman-dreniny tao amin'ny 40 taloha izy sy ny hany zanany tokan'ny fianakaviany.
David De Gea dia nobeazin'ny ray aman-dreniny nanankarena izay tsy nanala ny zanany lahy, fa nanome azy izay rehetra nilainy tamin'ny zanany.
Tena tia fanatanjahan-tena i David fony zaza mbola kely. Na izany aza, ny ray aman-dreniny manokana ny mamanany dia nikarakara tsara ny fandanjana ara-pahasalamana eo amin'ny fianarana sy ny fanatanjahantena. Namela azy hanomboka ny asany amin'ny lalao baolina kitra amin'ny iray amin'ireo académie fanta-daza amin'ny teny espaniola izy misaotra noho ny sata ara-bola matanjaka.
David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa:Start Career
Nanomboka niaraka tamin'ny La Escuela De Futbol Atletico Casarrubuelos - izay mifandray amin'ny Atletico Madrid. Cruz, mpanazatra baolina kitra teo aloha, dia nitifitra indray mandeha indray ny alaham-panahin'i Davida De Gea maro izay mety ho sarotra inoana. Hoy izy, "Taona maro talohan'ny nanatanterahany ny asany, dia mpilalao lavorary tonga lafatra i David mandra-pahatongan'ny taonan'ny 14 talohan'ny nivadika ho mpiambina iray." Oh yeah, azonao tsara izany !! Tsy mpanafika velively izy hatramin'ny voalohany.
Eto izy, 6 ihany no manana volo marevaka marevaka maka sary amin'ny ekipany.
David De Gea Tanora Tantara
Nanao nilalao ho an'ny ekipany ihany koa i David indraindray raha ilaina izany. Ny foiben'ny Spaniard indray eo amin'ny sary etsy ambany dia naneho toetra tsara amin'ny maha-mpilalao baolina miditra sy mpampiasa azy tamin'ny fahatanorany. Raha ilaina, dia afaka milalao ny toeran'ny toerana rehetra izy (fiarovan-tena, miditra sy anjara andraikitra). Mbola mpilalao an-tsambo foana i David mandra-pahatongan'ny taonan'ny 14, taona izay namaritra fiovana lehibe teo amin'ny asany.
David De Gea Tantaram-pianakaviana - Andron'ny Asa Fahaizaizana
Ny haavony mitombo hatrany amin'ny 6 ft 4 dia namela ny haavony ho mpilalao baolina. Niaraka tamin'ny fiezahana hanaraka ny dian'ny dadany, dia nanapa-kevitra i David mba hiverina ho mpiambina iray ho an'ny fiainana. Ankoatry ny fitandremana ny tanjona dia nandray anjara tamin'ny basketball koa i David izay nampiasany ny halavany.
David De Gea- Ilay fotoana iray mpitari-dàlana vao haingana tao an-tanàna
Ny De Gea dia nametraka ny toerany ho toy ny mpiambina gorodona feno nandritra ny efatra ambin'ny folo taona. Izy dia anisan'ny ekipa iray izay nahazo ny trosan'ny tanora tranainy indrindra tany Espaina. Ny kabinetran'ny trophy manentana ao amin'ny ekipa tanora ao amin'ny De Gea dia hita taratra eto ambany.
Ny kabinetran'ny trophy any amin'ny ekipan'ny tanora Jeu, La Escuela De Futbol, ​​Atletico Casarrubuelos.
Raha vantany vao vonona ho an'ny fanoherana lehibe kokoa ilay mpitifitra tanora, dia nasaina izy hanatevin-daharana ny ekipa ekipa Atletico Madrid. Noho ny talentany goavambe De Gea dia nanao sonia fifanarahana matihanina tamin'ny taona 17.
Tao amin'ny 2011 dia nahazo fandraisana an-tsokosoko i David izay mpilalao mahay, izay miezaka ny ho tsara kokoa, no andrasany amin'ny asany. Ny Manchester United dia lasa klioba vaovao an'i David ary nanao sonia fifanarahana maharitra miaraka amin'izy ireo. De Gea nanolo ny lazaina Edwin van der Sar taorian'ny fisotroan-dronono. Ny fampisehoana ambony indrindra tao amin'ny klioba dia nitarika ho amin'ny anaram-bosotra 'Edwin Van De Gea '. Ny ambiny araka ny filazany, dia tantara.
David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa: Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny fianakaviana fianakaviana David De Gea dia mendrika ny hahalala. Amin'ny ankapobeny, izy dia avy amin'ny tranon'ireo mpiambina tanjona. Ny rainy, Jose De Gea dia mpilanja an-tariby ho an'ny Getafe fantatra ho an'ny fanatrehany tena. Izy dia anisan'ireo mpiambina ny tanjona voalohany nokarakarain'ny Getafe nandritra ny fananganana azy ireo tamin'ny fizarana 1983-84. Samy niaina ny ray aman-dreny ary niaina ny tanjon'izy ireo. Jose, ny dadany, no mpanazatra tsara indrindra satria tena mitaky. Tao amin'ny Atletico, izy dia tao amin'ny lalao rehetra ary koa ny fotoam-pampianarana tokana tao anatin'ny orana, rivotra na oram-panala.
Ny maman'i David De Gea, Marivi Quintana dia mpitandrina trano nandritra ny androm-piainany. Tsaroany ny fikarakarana tsara ny vadiny sy ny zanany lahy / zanaka. Marivi Quintana dia mpisolovavan'ny 'fitoviana mitovy eo amin'ny fanabeazana sy ny fanatanjahantena'. Izany no tiany ho an'ny zanany.
Araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany, dia samy ao amin'ny 60 avokoa ireo ray aman-dreny. Manana ny zanany lahy ao amin'ny 40 izy ireo. Samy miaina izy ireo Toledo, tanàna iray sy fokonolona any Espaina afovoany.
David De Gea fianakaviana background
Nahatsiaro an'i Davida indray mandeha; "Hiantso ny reniko, roa, telo, inefatra isan-kerinandro. Nilaza foana izy fa tena nanahy ahy izy. Natahotra foana izy ny amin'ny fandanjalanjana ny fianarako sy ny fanatanjahantena. Ny ray aman-dreniko dia hitondra fiara 50km isan'andro raha hijery ahy any amin'ny sehatry ny fampiofanana ao amin'ny kianjan'i Alarcon ".
Amin'ny ankapobeny, ny fanohanan'ny ray aman-dreniny dia fitaovana amin'ny asa aman-draharahany. Ny anjara toeran'izy ireo dia miharihary eo amin'ireo namana akaiky izay nahafantatra azy ireo.
David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa:Relationship Life
David De Gea dia tsy manambady toy ny tamin'ny fotoana nanoratana. Ny Spanard dia lazaina fa ao anatin'ny fifandraisana maharitra eo amin'ny fotoana maharitra Edurne García Almagro izay 5 taona efa antitra noho izy.
Edurne, mpihira Espaniola, mpilalao sarimihetsika, ary mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra fantatra amin'ny fanatrehana fandaharana ara-tsosialy hatramin'ny fahazazany. Tamin'ny taona 9 dia lasa mpikambana ao amin'ny tarika mozika espaniola izy Trastos. Niantso an-tarobia izy tamin'ny faran'ny 2005 rehefa nandray anjara tamin'ny fandaharana Espaniola Operación Triunfo izy ary nahavita ny fahenina tao amin'ny 2006.
Tsy manambady izy ireo fa angamba mieritreritra azy ireo amin'ny ho avy. Izay rehetra mahafantatra azy dia mahita azy ireo ho mpivady lavorary. David De Gea dia tsy namela tovovavy teo amin'ny fiainany afa-tsy Edurne. Araka ny heviny;
"Faly be i Davida sy izaho. Amiko foana ho azy, na dia eo aza ny fifamatorany amin'ny tanjona mitazona ny fanoloran-tena. Mbola mahita fotoana tsara ho ahy ihany izy. "
Ny fitiavan'i David De Gea an'i Edurne
Matetika i David sy Edurne no manatrika ny antoko sy ny fanatanjahan-tena isan-karazany. Eny tokoa, misy vehivavy afaka milaza raha misy olona tia azy amin'ny fotoana maha-vonona azy hampiasa vola. Ho an'i David, ny vola takiana amin'ny Edurne dia tsy misy dikany. Io no fotoana laniana izay tsy voavidy.
David De Gea mandany fotoana miavaka amin'ny Girlfriend Edurne
Radamel Falcao, Juan Mata, Antoine Griezmann ary Robert Lewandowski dia nanana tantaram-pitiavana toa an'i David De Gea.
David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa:Miala tsiny ny maso
David de Gea dia manana hyperopia, izay midika hoe fehezan-dalàna momba ny fampitam-baovao ho an'ny maso. Ity dia karazana fahadisoana hafahafa izay ahitan'ny tarika lavitra kokoa lavitra noho ireo zavatra izay akaiky.
Ny Espaniola dia manana solomaso vonton-koditra amin'ny alàlan'ny fiainany ary misolo-tanana mifandray
nandritra ny lalao.
David De Gea's Eye Defect-Nahoana izy no mifandray amin'ny family
Ny asany amin'ny asa aman-draharaha dia mbola tsy nisy fiantraikany tamin'ny fepetra noraisiny.
David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa:Ny Super Agent
Jorge Paulo Agostinho Mendes (teraka 7 Janoary 1966), fantatra kokoa amin'ny hoe Jorge Mendes no mpitsabo an'i David De Gea.
David De Gea Agent-Jorgie Mendes
Anisan'ireo mpilalao baolina kitra be mpanaraka indrindra eran-tany i Mendes, miaraka amin'ireo mpanjifa Cristiano Ronaldo, David de Gea, Diego Costa, James Rodríguez, ary José Mourinho. Mendes dia matetika antsoina hoe "super-agent". Manana mpilalao baolina kitra 102 hafa izy amin'ny maha-mpanjifa azy ary nanao fifanarahana mendrika ny vola $ 1 Billion.
David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa:Ny fiarany
David De Gea mitarika Captiva - SUV novokarin'i Chevrolet ($ 50.000)
Tsy toy ny Raheem Sterling, tsy ampiasaina amin'ny fiaramanidina fiara izy, iray isaky ny andro isan-kerinandro. David dia olona tsotra izay tena mahazo aina amin'ny azy Chevrolet Captiva.
David De Gea an'ny Chevrolet Captiva Car
David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa:Ny tranony
Ny tranon'i David De Gea dia mendrika amin'ny £ 2.75m. Sary nohazavaina etsy ambany.
David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa:Ny Namany Taloha
Ny namana tranainy indrindra David dia tsy olona hafa Kun Aguero.
David De Gea ny fisakaizana efa antitra miaraka amin'i Kun Aguero
Tena nahomby izy Kun nandritra ny fotoanany tao Athletico Madrid. Samy nizara ny efitrano izy roa lahy. Tsy hoe satria tsy mahavidy vola izy ireo, fa noho ny fisakaizan'ny fisakaizam-pifandraisana.
David De Gea Namana akaiky indrindra
Amin'izay fotoana izay at Athletico, Rehefa tratran'ny hazofijaliana i David, dia ny fametrahana haingana dia haingana na handrotsahana azy Kun lavitra noho ny mpiara-miasa aminy rehetra.
David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa:Hair Style
David koa dia fanta-daza amin'ny fomba mahazatra mahazatra mohawk.
Manana volo tanteraka avy amin'ny andaniny tsirairay avy ny zavatra iray izay nahazo ny mpankafy Manchester United rehetra misaotra an'i David De Gea. Mipongatra bebe kokoa izany fa manaraka an'i Paul Pogba satria ity mpankafy Manchester United ity no manolo-kevitra.
Manchester United Fan Copy David's Geah's Hairstyle